News - Youxing Shark's 2019 New Year Message: Ekwenyere m ya!
Na 2018 pụrụ iche, anyị nwere nkwenye ntụkwasị obi zuru oke site na ọganihu nke mba ahụ. E nwere ebili mmiri na ebili mmiri n’uwa site n’oge ruo n’oge, ma anyị na-azọ ije n’abụ na-adịghị agbanwe agbanwe ma kpebisie ike ịga n’ihu na njem nke ị nweta ọha mmadụ zuru oke dị ka ndokwa. Ndozigharị na imeghe na mmalite ọhụụ, anyị na-anwa anwa ịnwa ịbanye n'ụsọ osimiri dị egwu, merie nsogbu, mepee ụzọ ọhụrụ, ma gaa n'ihu ịgbasa mpaghara ọhụrụ nke mgbanwe na imeghe n'oge ọhụrụ; nsogbu esemokwu mba ụwa, ọ naghị eju anyị anya na mgbanwe dị iche iche, na-agbaso ụkpụrụ, na-agbada ala, na-eme ihe ziri ezi, ma nwee mkpebi siri ike Na nnọgidesi ike, ọ na-egosipụta ibu ọrụ nke nnukwu mba.
N'afọ a, anyị abụrụla ndị na-enweghị enyemaka, ndị ọnyà siri ike na nchekasị, ọbụnakwa bidoro ịjụ ihe pụtara ịnọgidesi ike pụtara na ebee ka ntụnye nke mbọ anyị dị. Mgbe ndị ahụ na ihe ndị ahụ metụrụ akụkụ dịkarịsịrị nro nke obi anyị mma, wee kpasuo Internetntanetị wee bute esemokwu, anyị ga-ebe akwa ma kwaa mba, ma jụọ: Gịnị bụ nsogbu ụwa? Ọ ga-adị mma echi?
Agbanyeghị, n’afọ a, agbanyeghị na anya mmiri, akwa ụta na ume ilu ka dị oke, ntụzịaka nke ọganiihu obodo, ọha mmadụ, na ndị mmadụ ga-aga n’ihu igosi na nke a ka bụ oge kwesiri ịga n’ihu “kwere”!
Anyị kwenyere na nnọgidesi ike dị mma mgbe niile, na ọchịchịrị agaghị emerụ ìhè ahụ, na mbọ anyị agaghị enwe mmechuihu, na mbọ ahụ agaghị abụ n'efu, na ihe ịga nke ọma ga-abịa mgbe niile!
Industrylọ ọrụ na-eme ka mba ahụ dị ọhụrụ, ịrụsi ọrụ ike na-eme ka mba ahụ dị ọhụrụ.
Dịka ụlọ ọrụ na-arụpụta kemịkalụ, anyị kwenyere na nrube isi nke ụlọ ọrụ ahụ na mmejuputa atumatu nchebe gburugburu ebe obibi ga-abụ nsị nke nhicha mmiri n'etiti narị otu narị nde ụlọ ọrụ ma nye aka ya na ike ya n'oké osimiri azụmahịa mba ahụ!
Anyị kwenyere na site na mgbanwe na-aga n'ihu, nkwukọrịta na mmụta na ndị ahịa na ndị enyi, Shark ga-agba ndị dum jigsaw gluu na ụlọ ọrụ polyurethane gluu ume ka ha na-aga n'ihu na-agbanwe ma na-enwe ọganiihu nke echiche pụtara ìhè, nke bụ asọmpi ọma na mmepe ngwa ngwa maka ụlọ ọrụ ahụ. . Nye aka!
N'afọ gara aga, Sharkman kere mmepe ahịa dị elu na nnukwu ọganiihu. Anyị emeela ka ndị ọrụ anyị mee njem na-agaghị echefu echefu ma nwee obi ụtọ na Zhuhai, Macau, Beijing na New Zealand na mba ofesi. Ya mere, anyị kwenyere na uri na ebe dị anya na-amalite site na otu nzọụkwụ. Naanị site n'ịrụsi ọrụ ike, anyị ga-enwe ike iru nrọ nke "ịhụ ụwa ọnụ".
Na-eche ihu n’oge gara aga, obodo anyị, ụlọ anyị, na azụmaahịa anyị na-adabere na mmalite ọhụụ. Obi ike na ịnụ ọkụ n'obi gbakọtara n'ime afọ iri anọ nke mgbanwe na imeghe emeela ka anyị nwekwuo nkụda mmụọ na obi ike. N'adịghị afọ ojuju, na-ala azụ, na-ejegharị, anyị kwenyesiri ike na ọla edo nke ndị na-achụ nrọ, anyị na-achọ ịnwa agụụ, nwee obi ike ibi, ịnwa ịlụ ọgụ, amaja ịgbanwe. N'afọ ọhụrụ, ka anyị nabata iwe ọhụrụ nke oge a, mepee uche anyị maka mmiri mmiri nke ụwa, nọgidesie ike na-agụsi agụụ ike, nọgidesie ike n'onwe ya, nọgidesie ike n'eziokwu, nọgidesie ike n'ịhụnanya-maka ọtụtụ ihe onwunwe, maka ihe ndị ọzọ mmụọ bara ụba.
Oge na-aga, olileanya na-aga n'ihu. Anyị kwenyere na nnwere onwe na nnwere onwe ga-abụ ụgwọ ọrụ zuru ụwa ọnụ maka mbọ siri ike. Nloghachi nke ọgaranya ga-aghọ ihe agha siri ike na baajị nke ndụ.
N’afọ ọhụrụ, kwenye na mbara igwe ka na-acha anụnụ anụnụ kwa ụtụtụ mgbe ị tetere, kwenye n’echiche ikpe ziri ezi n’oge ọ bụla nke tisasị, kwenye na mkpebi siri ike nke uru n’oge ọ bụla nke mgbanwe, ma kwere na gị n’oge ọ bụla nke itughari na-atụgharị. Nnọgidesi ike n'ihe ga-emecha dị mma!
Ndewo, Afọ Ọhụrụ China bara ọgaranya!
Ndewo, nrọ ọ bụla na nrọ dị ukwuu!